Fitaizana zaza manana autisme - Fidio ny Tracker GPS tsara indrindra ho an'ny zanakao | Singapore Top Mini GPS Tracker manokana ho an'ny autism / Autistic Kids & Dementia Anti-panahy
Manana zanaka voan'ny Autism Spectrum Disorder (ASD) ve ianao? Avy eo dia tokony ho fantatrao fa misy atahorana be ny mety hanandraman'ny zaza toy izany hirenireny lavitra nefa tsy mahazo alalana. Ho an'ny ray aman-dreny manan-janaka ASD, ny GPS Tracker dia tsy lafo vidy fa ilaina. Betsaka ny vokatra anaovana dokambarotra isan'andro izay miaro ireo ankizy ireo tsy hivezivezy irery. Handinika ny sasany amin'ireo malaza indrindra any izahay mba hanampiana ny fianakaviana hisafidy sy hisafidy tsara.
GPS014D (GPS pendant tracker ho an'ny zokiolona & ankizy)
Ho an'ny vidiny manodidina ny $ 238 ary tsy misy fonosana famandrihana isam-bolana na inona na inona, dia fanaraha-maso izany ho an'ny zokiolona sy ny ankizy. Izy io dia hitafy toy ny pendant mahazatra hafa eo amin'ny tendany. Manana tracker GPS napetraka ao anatin'io izy io izay manara-maso ny hetsika ataon'ireo ankizy mila aina manokana, manana fakantsary izay mandefa hafatra SOS amin'ny sary miaraka amin'ity sary ity fa tsy vitan'ny mahazo ny fanairana fa ianao koa mahita izay nitranga. Fitaovana karazana 2 fomba, midika izany fa tsy afaka mandray azy fotsiny ny hafatra fa afaka alefa any aminy ihany koa. Ao amin'ny pendant dia misy:
ahantona tady mahazaka
miantso ny laharana 1
miantso ny laharana 2
slot karatra sim
Ny mpanondro tamba-jotra
Ny pendant GPS dia manana tracker tafiditra izay mamela ny fanaraha-maso ny toerana sy ny fivezivezena, misy ny safidy fanarahan-dia amin'ny fotoana tena izy izay mampiseho blip (toerana misy pendant) ary manodidina azy. Misy fizahana hazo izay ahafahanao manamarina ireo toerana rehetra notsidihina dia azonao atao ny mahafantatra ireo toerana fitsidihan'ny zaza. Izy io dia miaraka amin'ny famantaranandro miresaka izay manampy ny mpitafy hahafantatra ny ora, mety tena manampy izany. Misy ny safidy fefy GEO ahafahanao manisy marika ny faritra iray ho toy ny fetra, izany dia manakana ny mpitafy tsy hiampita io perimeter io. Misy ny fanairana SOS izay mety hateraka raha sendra loza. Misy fampahatsiahivana bateria ambany izay hanampy anao hahafantatra ny filàna ampandoavina ny fitaovana indrindra rehefa ambany ny bateria. Ampahatsiahivina ianao rehefa manova ny karatra sim, io dia manampy azy io hiasa tsara hatrany. Afaka maka sary ny fakantsary ary io no iray amin'ireo fomba tsara indrindra hanaraha-maso ny zaza ilain'ny zaza manokana satria hitanao na dia lavitra aza indraindray. Misy bokotra iray izay azo atosika hiantso ny iray amin'ireo laharana voasoratra anarana, ahafahan'izy ireo manatona raha ilaina izany. Rehefa misy fiantsoana ho avy dia mihozongozona ny pendant ary mampahafantatra ny mpitafy izany antso izany.
Ny habeny dia 45 * 50 * 15.5mm (L * B * H) ary milanja manodidina ny 33grams, ny tarika 2G GSM frekuensi; 850 / 900 / 1800 / 1900Mhz ary tarika 3G an'ny 850 / 1900Mhz ho an'ny safidy 1 sy 900 / 2100Mhz ho an'ny safidy 2. Manana GPRS ny kilasy 12 TCP / IP. Izy io dia manana GPS mamantatra ny fotoana 60 / 29 / 5 ho an'ny fanombohana mangatsiaka, mafana sy mafana. Izy io dia manana toerana fampitaovana GPS manakaiky hatramin'ny 10 hatramin'ny 15mm, ary manana koa ny WIFI fahamarinan'ny 15-100 (ao anaty wifi misy). Ny mari-pana miasa dia -18'C ~ + 45'C ary ny fatran'ny bateria dia 500mAh.
GPS033W (GPS smartwatch miaraka amin'ny antso an-tsary)
Tsy mora loatra ny fanaraha-maso ny zanakao ilain'ny ankizy manokana, miaraka amin'ny GPS smartwatch sy ny zotram-piasa azonao atao betsaka ary miambina tsara ny zanakao raha mbola manao zavatra hafa ianao. Ny smartwatch dia saika manao ny zava-drehetra ataon'ny smartwatch mahazatra. Izy io dia manana fampisehoana efijery lehibe amin'ny 1.4 santimetatra ary tsy azo tanterahina ihany koa ka tsy manana ahiahy ianao satria IP67 dia voaroy sy vovoka ihany koa. Ny sasany amin'ireo endri-javatra mampiavaka azy dia:
Fiantsoana roa mandeha
SOS vonjy taitra
Alarm power low
Ny smartwatch dia manana fampiasa GPS & AGPS matanjaka koa. Manana ny toeran'ny LBS sy Wi-Fi izy mety miasa. Ny finday na solosaina dia azo ampiasaina hifehezana na hanaraha-maso ilay fitaovana. Misy toerana misy ny GPRS amin'ny toerana tena izy izay ahafahana manara-maso sy manara-maso ihany koa. Io dia mamela antso an-tariby roa izay midika hoe afaka miantso azy ireo ianao ary afaka mandray ny antso an-dry zareo koa. Misy koa ny fiasa Bluetooth sy Wi-Fi, misy fakan-tsary azo ampiasaina hakana sary ary ampiasaina indrindra amin'ny fiantsoana horonan-tsary. Azonao atao ny mijery rakipeo eo aminy, angamba nalefanao tany amin'izy ireo ny sarin'ny fianakaviana, azon'izy ireo atao ny maka sary azy io rehefa mandeha ny fotoana. Misy ny telefaona iray izay niantso ny trano ny isa rehetra tianao hidirany. Misy ny faritra fiarovana azonao ampiasaina hanakanana ny hetsik'izy ireo sy hanakanana azy ireo tsy hiampita sisintany. Izy io dia manana fampandrenesana bateria ambany izay mampatsiahy rehefa mihodina ambany ambany ny bateria. Azo atao koa ny manakatona lavitra ary midika izany fa azonao atao ny mamono azy lavitra.
Ny habeny dia 232 * 42 * 17mm (L * B * H) miaraka amin'ny fampisehoana IPS sy ny tsipika fijerena silika, ny tarika 2G GSM frequency dia; 850 / 900 / 1800 / 1900Mhz, tarika 3G B1 B2 B5 B8 ary tarika 4G an'ny FDD-LTE B1 B3 B5 B7 B8 ary koa TDD -X B38 B39 B40 B41 B12 ary koa ny tarika 60G. Manana GPRS ny kilasy 29 TCP / IP. Izy io dia manana GPS mamantatra ny fotoana 5 / 5 / 10 ho an'ny fanombohana mangatsiaka, mafana sy mafana. Izy io dia manana toerana fampitaovana GPS manakaiky hatramin'ny 30 hatramin'ny 50m, ary manana koa ny WIFI fahamarinan'ny 18-45 (ao anaty wifi misy). Ny mari-pana miasa dia -650'C ~ + 4'C ary ny fatran'ny bateria dia 1mAh. Misy ihany koa ny Dock charge charging magnetic, manana mpisava lalana avo lenta miaraka amin'ny mikrô ihany koa. Manana ora fitenenana mandritra ny ora 3 ary fijoroana mandritra ny andro XNUMX-XNUMX.
9177 Total Views 1 Views Today